Shona Translation 08-02-2007 - The Zimbabwean
Shona Translation 08-02-2007
NG>Mazana akati kuti evatevedzeri veMDC kuBulawayo akaratidzira kusafara kwevanhu nenyaya yaPresident Mugabe yekuda kugara pachinzvimbo kusvika mugore ra2010. Vakasimudza magwaro nekuimba nziyo dzekutsoropodza mukuratidzira uku kwakabata mapurisa akarivara zvokuti paakazosvika nemotokari dzawo vanhu vakangonyangarika nokuti vaisada zvekunyongana nemapurisa kana kusungwa.
Varimi Vatsva vosiya minda
HARARE – Zvihuru zvevarimi vatsva vakatora minda kubva kuvachena muchirongwa chainzi neZanu (PF) chaiva cheChimurenga vava kusiya minda iya vachienda kudzimba dzavo.
Vanoti VaMugabe neZanu(PF) yavo yakavatengesa nokuti havana kuita zvavakavimbisa zvekupa vanhu minda nekuzovapawo chikafu nemafuta ekufambisa basa raidiwa kuitwa paivhu racho, ivo vachirimira nyika.
Zvinhu zvese izvi hazvina kumbouya mukushaikwa kwemafuta uko kuri kutokonzera kuti vanhu varovane pamitsetse yemafuta.
Avo vakange vati vapinda basa pamapurazi vanoti hapana mari yavari kuwana. Vakaudza dare reParamende kuti $8 500 yavari kupihwa haina kwainosvika uye vakatotanga kuramwa mabasa pashoma nepashoma mukunyora kwatiri kutita uku.
Pakatanga zvekutora minda mugore ra2000, zvichitungamirirwa naVaMugabe vachiitira kuti vanhu vasaone kutadza kwavo kutonga kana kuti vaone kuti vanhu vakange varamba zvavaida zvokuramba vachitonga, vanhu 70 000 vakakwira mabhazi ehurumende aivaendesa pamagedhi emapurazi – ndirwo rwubatsiro rwekupedzisira rwavakapihwa irworwo. Iko zvino vangova vanhu vasina pokugara.
VaEdward Dzeka vesangano revashandi vemumapurazi, General Agriculture and Plantations Workers Union of Zimbabwe vakati masapurazi acho matsva aipa vashandi marara.
PaCremer Farm kuChegutu vashandi vakakanda mapadza avo pasi vachiti $8 320 yavari kupihwa haikwani asi $24,000.
Mawovheti oda imwe mari
HARARE – Varwiri verusununguko, avo vakambopihwa ma$50,000 neimwe mari yepamwedzi mushure mekumanikidza hurumende, vava kuda imwe mari yavanoti imari yavakavimbisiwa kare.
Sachigaro veZimbabwe National War Veterans Association (ZNWVA) vaElphas Chitera, vakati mawovheti anofanirwa kurwira mari yakawanda nokuti kukwira kwezvinhu kwaita kuti yavanopihwa isakwana chinhu.
VaChitera vakaudza vamwe vavo kuti vaifanirwa kupihwa dzidzo yemahara, kurapwa pachena, uye kupihwa zvikwereti zvisina imwe mari inozoiswa pamusoro, uye vakatsoropodza hurumende nekuvimbisa zvinhu zvaisina kuzoita.
Mashefu eZesa okumbira kuti hurumende isatengese Hwange kuMalaysia
HARARE – Mashefu aZimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA) akambira musangano nemakurukota ehurumende kuti vataure nezvechirongwa chehurumende chekuda kupatsanura Hwange Power Plant vachitengesa rumwe rutivi rwayo kukambani yemaMalaysia inonzi YTL Corporation.
Bhodhi reZESA nemamaneja ayo vakabvuma kuti Zesa ine chikwereti chinosvika Z$105 billion, uye vanofunga kuti kutengeswa uku hakwaizobatsira Zimbabwe.
Vanoda kuti President Robert Mugabe nemakurukota avo vasiyane nechirongwa ichi che$10,2 trillion nokuti kutengesa chinhu chakaita seHwange inogadzira magetsi kune vekunze kwaisaratidza kufunga kwakadzama.
Bhodhi reZesa, iro rava nasachigaro Professor Christopher Chetsanga, rakati rinoda musangano naPresident Mugabe richiteverawo zvakambotaurwa neveAffirmative Action Group kuti ramangwana renyika rinogona kukanganisika kana zvinhu zvinokosha segwenya remagetsi zvikatengeserwa kunze kwenyika.
YTL Corporation yakatengeserwa mashares eHwange pasina kumboendwa kuTender Board inowanzoongorora zvose zvokutengeswa kwezvhinhu zvehurumende, asi President vakazviti zvanga zvakanaka sezvo zvaiva mukudyidzana kwenyika dzekuchamhembe, South-South co-operation.
Governor weReserve Bank, vaGideon Gono svondo rakapera vakati Zimbabwe yaigona kuwana US$3 billion kubva mukutengesa makambani ehurumende ari kubvinza mari.
Chirongwa Maguta Charamba
HARARE – Chero zvazvo hurumende yakatanga chirongwa chemaguta chinomanikidzwa nechiuto, GMB iri kungotadza kuwana chikafu chinokwana kusvika pashoma panonzi ndipo panokodzera kuti nyika isazoita nzara nokuti vanhu havasi kuda kutengesera GMB nokuda kwemitengo iri pasi.
Strategic Grain Reserve iri kutadza kusvikika nokuti gore rakapera GMB yaitenga chibage ne$52,000 patani rimwe, iyo inonzi nevarimi ishoma nokuti vanogona kuwana Z$100,000 patani rimwe kana vakatengesa kuvagayi vakamira voga.
VeZimbabwean takanzwa kuti hurumende iri kuedza kuti idzosere Strategic Grain Reserve pamatani 936,000 asi zviri kuramba nenyaya yemutengo.
Zanu (PF) yatadza
HARARE – Governor weReserve Bank of Zimbabwe (RBZ) VaGideon Gono vakapa pfungwa dzavo nenyaya dzemari vanhu vachifunga kuti vachadzikisa dhora remuZimbabwe, iro radzika zvakatonyanya, asi havana kudaro, izvo zvakanyadzisa mabhizimusi anga akazvitarisira uyewo vatengesi vemari yekunze avo vanga vakamiririra kuti dhora ridonhe vagorova mari yakawanda nemazakwatira emari yekunze yavanga vakachengeta.
Ndizvo zvaita hupfumi hweZimbabwe mazuva ano izvi.
Zvinyorwa zvavaGono zvakabudisa zvirwere zvakawanda zvehupfumi hweZimbabwe asi isu tinongoti, “Ndambakuudzwa akaonekwa nembonje” nokuti chirwere chikuru chakataurwawo navaGono takambochitaura; chehuori hwemashefu ayo anokwanisa kutenga chibage kuGMB vonochitengesera zvakare kuGMB nemari iri pamusoro. Mashefu ari kuita zvimwe chetezvo nemafuta edzimotokari.
Chinonyanya kutambudza ndechekuti VaGono havana kumboratidza kuti vane nzira dzekurapa chirwere ichi, vachiti zvose zvichaonekwa muzvibvumirano zvichaitwa pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi.
VaGono, ndiye mumwe wevamwe vanofanirwa kuziva kuti nyaya yechibvumirano chakadai inongoita chete kana paine kubvumirana pakati pemativi ose panyaya dzematongerwo enyika – izvo zvisipo pari zvino.
Tripartite Negotiating Forum (TNF) yavanosangana haisisina makumbo nokuti vashandi nevashandirwi vakatotadza kuwirirana – vashandi vachiti vanoda mari, vashandirwi vachiti mabhizimusi avo ava kutofa. Ivo vashandi vacho vasara vashomanana.
VaGono ngavachingoziva chete kuti hapana chichakwanisika kuita kana hurumende isati yabviswa kukaiswa itsva.